မေး – မင်ျဂလာပါအဈကိုရေ။ Facebook သုံးရငျ Video File တှကေ Auto Play တှေ ဖွဈနလေို့ပါ။ ဘယျလိုပိတျရမှာပါလဲခငျဗြာ။
ဖွေ – Facebook မှာ Auto Play ပိတျခငျြရငျတော့ အဆငျ့လေးဆငျ့ လုပျရပါမယျ။ ပွီးတော့ Facebook App ကလညျး နောကျဆုံး Update ဖွဈမှ လုပျလို့ရမှာပါ။ (1). Facebook Settings ထဲကို ဝငျပါ။ (2). Media and Contacts ကို ရှာပွီးတော့ဝငျပါ။ (3). Autoplay ထဲကို ထပျဝငျပါ။ (4). Never Autoplay Videos ထားပါ။ အဆငျပွပေါစခေငျဗြာ။
မေး – အဈကိုရေ ကြှနျတေျာ့ဖုနျးက OPPO F1s ပါ။ Software Update တငျလိုကျပွီးတော့ Logo ပွနျတကျလာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Email တှေ တောငျးနလေို့ပါ။ ရှဆေ့ကျမရဘူး ဖွဈနပေါတယျ။ ဘာဖွဈလို့ပါလဲခငျဗြာ။ ကူညီပါဦး။
ဖွေ – ဟုတျကဲ့။ Email ကို မှတျမိရငျတော့ ထညျ့ပေးလို့ ရပါတယျ။ မမှတျမိဘူးဆိုရငျတော့ Email ကို ကြျောကွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Email ကို ကြျောခငျြရငျတော့ နီးစပျရာ Software ဆိုငျမှာ ပွကွညျ့လိုကျတာက ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျခငျဗြာ။
မေး – အဈကိုရေ ဖုနျးတှကေို Virus မဝငျနိုငျအောငျ တားဆီးလို့ရတဲ့ Software တှေ ရှိပါသလားခငျဗြာ။ ဖွကွေားပေးပါဦးအဈကိုရေ။
ဖွေ – ဟုတျကဲ့။ ရှိပါတယျ။ မိမိဖုနျးရဲ့ Playstore မှာ Anti Virus ဆိုပွီး စာရိုကျပွီးတော့ ရှာကွညျ့လိုကျပါ။ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ မိမိရဲ့ဖုနျးနဲ့ ကိုကျညီမယျ့ Anti Virus တဈခုခုကို ထညျ့သှငျးပွီး စမျးကွညျ့လိုကျပါ။ အဆငျပွပေါစခေငျဗြာ။
မေး – အဈကိုရေ ဖုနျးတှမှောပါတဲ့ Qualcomm ဆိုတာက ဘာကိုပွောတာပါလဲခငျဗြာ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
ဖွေ – Qualcomm CPU ဆိုတာကတော့ (Central Processing Unit) Phone Hardware အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈပွီး Firmware နှငျ့ Userdata မြားကို သိုလှောငျပေးတဲ့ IC လေးကို မွနျနှုနျးမွငျ့အောငျ ထောကျပံ့ထိနျးခြုပျပေးသော Chipset ဖွဈပါတယျ။ စြေးကွီးတဲ့ Phone မြားမှာ Qualcomm CPU အရညျအသှေးမွငျ့မြားသာ အသုံးမြားပါတယျခငျဗြာ။
မေး – မင်ျဂလာပါခငျဗြာ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ဖုနျးက Sim Card ထညျ့ထားပမေယျ့လညျး လိုငျးမတကျဘူး ဖွဈနလေို့ပါ။ အဲ့ဒါ ဘာကွောငျ့ပါလဲခငျဗြာ။ ပွုပွငျလို့ ရနိုငျပါသလား။
ဖွေ – Sim Card နဲ့ ဖုနျးလိုငျးပိုငျးက မတူပါဘူးခငျဗြာ။ အရငျဆုံး Sim သိမသိကို ဖုနျးရဲ့ Setting ထဲမှ Mobile Network ထဲတှငျ Sim သိမသိကို ကွညျ့လိုကျပါ။ Sim သိနပေါက လိုငျးပိုငျးကို ပွုပွငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Software သို့မဟုတျ Hareware ဖွငျ့ ပွုပွငျလို့ ရနိုငျပါတယျ။
မေး – အဈကိုရေ ကြှနျတျောရဲ့ Apple ID ကို မသှေ့ားလို့ပါခငျဗြာ။ ဘယျလိုပွနျလုပျရမှာပါလဲ။
ဖွေ – ဟုတျကဲ့။ Apple ID ကို မသှေ့ားရငျတော့ အသဈပွနျဖှငျ့လိုကျတာက ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ID ကို Recovery ပွနျလုပျတာက စာနဲ့ရှငျးပွပေးဖို့က သိပျမလှယျကူတာကွောငျ့ပါခငျဗြာ။
မေး – မင်ျဂလာပါအဈကိုရေ။ ဖုနျးနဲ့ကှနျပြူတာကိုခြိတျလို့ ကှနျပြူတာမှာ Virus ရှိနရေငျ ဖုနျးဆီကို ကူးစကျနိုငျပါသလားခငျဗြာ။
ဖွေ – ဟုတျကဲ့။ မင်ျဂလာပါခငျဗြာ။ Virus ရှိတဲ့ ကှနျပြူတာကနေ ဖုနျးကို Virus ဝငျနိုငျပါတယျ။ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ သို့သျော Virus ဝငျထားသောဖုနျးကနေ တခွားကှနျပြူတာကို ခြိတျမိရငျတော့ Virus က တခွားကှနျပြူတာမှာ အစှမျးပွမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးကိုတော့ ထိခိုကျမှု မရှိနိုငျပါဘူး အဈကိုရေ။
မေး – အဈကိုရေ ကြှနျတေျာ့ဖုနျးက အားမသှငျးဘဲနဲ့လညျး တဈခါတလမှော အားဝငျတဲ့ပုံကို ပွနလေို့ပါခငျဗြာ။ အဲ့ဒါက ဘာဖွဈလို့ပါလဲအဈကိုရေ။
ဖွေ – အဲ့ဒီလိုဖွဈနတောကတော့ ဖုနျးရဲ့ အားသှငျးတဲ့ လမျးကွောငျးအပိုငျးမှာ ထိခိုကျမှုရှိထားလို့ အားမသှငျးဘဲနဲ့လညျး အားသှငျးတဲ့ပုံကို ပွနတောပါ။ အပကျြစီးထပျမဖွဈခငျမှာ နီးစပျရာ ဖုနျး Service ဆိုငျမှာ ပွကွညျ့လိုကျပါခငျဗြာ။
မေး – မင်ျဂလာပါအဈကိုရေ။ ကြှနျတေျာ့ iCloud အကောငျ့ကို မသှေ့ားလို့ပါ။ ဘယျလိုပွနျလုပျရငျ အဆငျပွနေိုငျမလဲခငျဗြာ။
ဖွေ – ဟုတျကဲ့။ မင်ျဂလာပါခငျဗြာ။ iCloud အကောငျ့မသှေ့ားရငျ Lock ကသြှားတကျပါတယျ။ iCloud ပွနျကြျောပေးရပါမယျ။ နီးစပျရာ Apple Service မှာ ပွကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
Rainbow Mobile Services & Training (သာကတေ) ဖုနျး-09-694069696,09-781869456 မှ ကူညီပံ့ပိုးပါသညျ။
မေး – မင်္ဂလာပါအစ်ကိုရေ။ Facebook သုံးရင် Video File တွေက Auto Play တွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘယ်လိုပိတ်ရမှာပါလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ – Facebook မှာ Auto Play ပိတ်ချင်ရင်တော့ အဆင့်လေးဆင့် လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ Facebook App ကလည်း နောက်ဆုံး Update ဖြစ်မှ လုပ်လို့ရမှာပါ။ (1). Facebook Settings ထဲကို ဝင်ပါ။ (2). Media and Contacts ကို ရှာပြီးတော့ဝင်ပါ။ (3). Autoplay ထဲကို ထပ်ဝင်ပါ။ (4). Never Autoplay Videos ထားပါ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
မေး – အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းက OPPO F1s ပါ။ Software Update တင်လိုက်ပြီးတော့ Logo ပြန်တက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Email တွေ တောင်းနေလို့ပါ။ ရှေ့ဆက်မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲခင်ဗျာ။ ကူညီပါဦး။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့။ Email ကို မှတ်မိရင်တော့ ထည့်ပေးလို့ ရပါတယ်။ မမှတ်မိဘူးဆိုရင်တော့ Email ကို ကျော်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Email ကို ကျော်ချင်ရင်တော့ နီးစပ်ရာ Software ဆိုင်မှာ ပြကြည့်လိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။
မေး – အစ်ကိုရေ ဖုန်းတွေကို Virus မဝင်နိုင်အောင် တားဆီးလို့ရတဲ့ Software တွေ ရှိပါသလားခင်ဗျာ။ ဖြေကြားပေးပါဦးအစ်ကိုရေ။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့။ ရှိပါတယ်။ မိမိဖုန်းရဲ့ Playstore မှာ Anti Virus ဆိုပြီး စာရိုက်ပြီးတော့ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မိမိရဲ့ဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Anti Virus တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
မေး – အစ်ကိုရေ ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Qualcomm ဆိုတာက ဘာကိုပြောတာပါလဲခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြေ – Qualcomm CPU ဆိုတာကတော့ (Central Processing Unit) Phone Hardware အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Firmware နှင့် Userdata များကို သိုလှောင်ပေးတဲ့ IC လေးကို မြန်နှုန်းမြင့်အောင် ထောက်ပံ့ထိန်းချုပ်ပေးသော Chipset ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ Phone များမှာ Qualcomm CPU အရည်အသွေးမြင့်များသာ အသုံးများပါတယ်ခင်ဗျာ။
မေး – မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဖုန်းက Sim Card ထည့်ထားပေမယ့်လည်း လိုင်းမတက်ဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျာ။ ပြုပြင်လို့ ရနိုင်ပါသလား။
ဖြေ – Sim Card နဲ့ ဖုန်းလိုင်းပိုင်းက မတူပါဘူးခင်ဗျာ။ အရင်ဆုံး Sim သိမသိကို ဖုန်းရဲ့ Setting ထဲမှ Mobile Network ထဲတွင် Sim သိမသိကို ကြည့်လိုက်ပါ။ Sim သိနေပါက လိုင်းပိုင်းကို ပြုပြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Software သို့မဟုတ် Hareware ဖြင့် ပြုပြင်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
မေး – အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ရဲ့ Apple ID ကို မေ့သွားလို့ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမှာပါလဲ။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့။ Apple ID ကို မေ့သွားရင်တော့ အသစ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ID ကို Recovery ပြန်လုပ်တာက စာနဲ့ရှင်းပြပေးဖို့က သိပ်မလွယ်ကူတာကြောင့်ပါခင်ဗျာ။
မေး – မင်္ဂလာပါအစ်ကိုရေ။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကိုချိတ်လို့ ကွန်ပျူတာမှာ Virus ရှိနေရင် ဖုန်းဆီကို ကူးစက်နိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Virus ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းကို Virus ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ သို့သော် Virus ဝင်ထားသောဖုန်းကနေ တခြားကွန်ပျူတာကို ချိတ်မိရင်တော့ Virus က တခြားကွန်ပျူတာမှာ အစွမ်းပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုတော့ ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပါဘူး အစ်ကိုရေ။
မေး – အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းက အားမသွင်းဘဲနဲ့လည်း တစ်ခါတလေမှာ အားဝင်တဲ့ပုံကို ပြနေလို့ပါခင်ဗျာ။ အဲ့ဒါက ဘာဖြစ်လို့ပါလဲအစ်ကိုရေ။
ဖြေ – အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကတော့ ဖုန်းရဲ့ အားသွင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းအပိုင်းမှာ ထိခိုက်မှုရှိထားလို့ အားမသွင်းဘဲနဲ့လည်း အားသွင်းတဲ့ပုံကို ပြနေတာပါ။ အပျက်စီးထပ်မဖြစ်ခင်မှာ နီးစပ်ရာ ဖုန်း Service ဆိုင်မှာ ပြကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
မေး – မင်္ဂလာပါအစ်ကိုရေ။ ကျွန်တော့် iCloud အကောင့်ကို မေ့သွားလို့ပါ။ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ iCloud အကောင့်မေ့သွားရင် Lock ကျသွားတက်ပါတယ်။ iCloud ပြန်ကျော်ပေးရပါမယ်။ နီးစပ်ရာ Apple Service မှာ ပြကြည့်သင့်ပါတယ်။
Rainbow Mobile Services & Training (သာကေတ) ဖုန်း-09-694069696,09-781869456 မှ ကူညီပံ့ပိုးပါသည်။
Previous articleOnePlus7VS OnePlus7Pro
Next articleBEGO LIVE – Live Stream